İzmir Metro ve İzmir Tramvayı'nda Grev Kapıda | RayHaber
घरटर्कीटर्कियन एजेज कोस्ट35 इजमिरइजमिर मेट्रो र इजमिर ट्रामवे
इजमिर मेट्रो र इजमिर ट्रामवे
04 / 01 / 2019 35 इजमिर, यात्रु रेलगाडीहरू, रेल, टर्कियन एजेज कोस्ट, साधारण, KENTİÇİ रेल प्रणाली, HEADLINE, मेट्रो, टर्की, ट्राम
इजमिर सबवे र इजमिर ट्रामवे हड्ताल
इज्मिरमा IZBAN हडताल 25 दिन पछाडि छोड्छ र मेट्रो र ट्राम कामदारहरूले हडतालको तयारी गरिरहेछन्। डिमिरियोल İş ट्रेड युनियनले यस हप्ता दुबै कार्यस्थलहरूमा हड्तालको निर्णयलाई लटकाउन सक्छ। कोका कोकाओलुलो डेमिरियोल-ईज युनियन युनियन इजिमर शाखाका अध्यक्ष हुसेन एरियुजसँग हिजोको बैठकको वर्णन गर्दै 'युनियनलाई प्रस्ताव, कामदारहरूलाई सिधै होइन, हाम्रा मित्रहरूले अस्वीकार गरे, कुनै हडताल गरेन तर यस हप्ता हडताल गर्ने निर्णय गरेनौं,' उनले भने।
इज्मिरमा BZBAN कामदारहरूको हडतालले 25 दिन पछाडि छोडिदियो। Union ZBAN मजदुरहरूसँग समान युनियनमा आयोजना गरिएको इज्जिर मेट्रो र इज्मिर ट्राम मजदुरहरू हड्तालको निर्णयलाई टांग्न छलफल गरिरहेका छन्।
डिमिरियोल İş युनियनका मेयर हसीन एरिजले भनेका थिए: हिजो हामीले 15.00 वरपर हलकापन्नारमा अज्मिर अजीज कोकाओलुलाई भेट्यौं। 25 प्रस्ताव कोकाग्लूले मजदुरलाई बनाएको हो, संघलाई होइन। प्रस्ताव 25 प्रतिशत मा सबै समावेशी छ। हाम्रा साथीहरूले प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन्। कोकाग्लु त्यसपछि 'हामीले युनियन प्रस्ताव गरेका थियौं, उनीहरूले स्वीकार गरेनन्' उनले साझा गरे। यद्यपि यो प्रस्ताव युनियनलाई होइन, मजदुरलाई दिइएको थियो। कामदारहरूले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। हामीले सामूहिक मोलतोल वार्ताको क्रममा एक समावेशी 30.55 प्रतिशत अनुरोध गरेका थियौं, यो प्रस्ताव अझै मान्य छ। हाम्रा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो राय व्यक्त गरे कि कोकाओलुको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा, हडताल सामान्यतया शुरू हुनेछ। यद्यपि हामीले हडताल गर्ने निर्णय गरेका छैनौं। तर यस हप्ताको हड्तालको निर्णयलाई फाँसी दिन सकिन्छ। मजदुरहरुको माग हड्ताल जस्तो देखिन्छ। "
कोकाओएलयूबाट सर्तगत प्रस्ताव
"Kocaoğlu'nun IZBAN कामदारहरु" सशर्त "प्रतिशत 30 प्रस्ताव," मेट्रो र ट्राम कामदारहरुको 25 प्रतिशत स्वीकार्छन्, IZBAN ले 30 प्रतिशत दिने शर्त ", उनले भने। यद्यपि ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र कामदारहरूले कोकाग्लूको “सशर्त प्रस्ताव .. स्वीकार गरेनन्।
कहाँ इज्मिर मेट्रो र ट्रामवे लाइन प्रदान गर्दछ?
इज्मिर मेट्रो एक हल्का रेल सार्वजनिक यातायात प्रणाली हो जुन बोर्नोभा इव्का-एक्सएनयूएमएक्स र uykuyular Fahrettin Altay बीचको3स्टेशनमा सेवा पुर्‍याउँछ, जुन शहरको केन्द्रलाई पूर्व-पश्चिम मार्गमा जोड्दछ।
इज्मिर ट्राम पनि दुई लाइन को रूप मा संचालित। Karşıyakaअताहीहिर र अलाबेबीचको बीचमा चल्ने ट्रामले कोनाकमा हल्कापन्नर र फह्रेतिन अल्तायको बीच उडानहरू जारी राख्छ। (स्रोत: haber.sol)
इजमिर ढुवानीमा नयाँ खतरा! ...
IZBAN द्वार मा इजमिर मेट्रो स्ट्राइक पछि
BZBAN मा हड्ताल सुरु भयो ... सेवानिवृत्त मशिनिस्टहरूसँग हडताल ...
İZBAN मा मध्यस्थ बैठकहरु को दरवाजे मा Sonuç हड़ताल खत्म नहीं भयो
यूट्यूबमा मेट्रो र एयरलाइन कार्यकर्ता हड्ताल गर्न तयारी गर्दै छन्
BZBAN र मेट्रो वर्कर्स नयाँ वर्ष एलन मा स्ट्राइक
इजमिर मेट्रोमा हड्ताल
खरीद सूचना: भ्यान- Kapıköy रेखा alpzlp-Kapıköy…
Halkalı-केपाकुल रेलवे लाइन Çerkezköy - ...
लन्डन भूमिगतका लागि हतियार तयारी
इज्मिर रेट्रो महोत्सव दोस्रो पटक Alsancak स्टेशन मा छ ...
लन्डन स्ट्राइक हडतालमा आक्रमण
Mirzmir मेट्रो कामदारहरू
इजमिर ट्रामवे लाइन
इज्मिर ट्राम हडताल
Besiktas मा ऐतिहासिक टम्ब्स